Umphakathi ubhikishela izindlu | News24
Umphakathi ubhikishela izindlu
Isithombe: Sithunyelwe Umphakathi waseMgigimbe ubhikishe wavala umgwaqo ngoMsombuluko ekuseni ukhala ngokuthi kumele bakhelwe izindlu zikahulumeni.
UMPHAKATHI waseMgigimbe, kuWard 9, uvimbe umgwaqo ubhikishela izindlu ngoMsombuluko ekuseni.
Lo mphakathi ukhala ngokuthi ukuhlinzekwa kwezindlu kumele kuqale maduzane njengoba sekuphele iminyaka ulindele ukuthola izindlu zikahulumeni.
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal, u-Major Shooz Magudulela uthe: “Abantu abangu-40 bavimbe umgwaqo ngenkathi bebhikisha ngoMsombuluko ekuseni,” kusho yena.
Ilungu lo mphakathi elikhulume nephephandaba i-Stanger Weekly, elicele ukuthi igama lalo lingadalulwa, lithe iziphathimandla zakwamasipala zifikile endaweni yaseMgigimbe ngoMsombuluko ukuzo khulumisana nomphakathi wakule ndawo.
Uthe iziphathimandla zidlulise umbiko wokuthi kuzoba khona umhlangano womphakathi kanye neMeya ngeSonto ngomhlaka 22 kuNhlaba (May) 2016.
Leli lungu lo mphakathi lithe ngonyaka odlule iMeya yaKwaDukuza yahlangana nomphakathi waseMgigimbe emuva kokuba lo mphakathi wabhikisha ukhala ngazo izindlu.
Uthe kulomhlangano wangonyaka odlule iMeya yathembisa amalungu omphakathi ukuthi kuzoqala ukwakhiwa kwezindlu ungakashayi uZibandlela (December) 2015.
Uqhube wathi uma umhlangano ohlelelwe iSonto lakusasa ungafezeki umphakathi uzoqala phansi ngokubhikisha.
Uthe: “Iziphathimandla azisitsheli isizathu esibambekayo sokuthi yindaba kuthathe isikhathi esingaka ukuthi kuqalwe ukwakhiwa kwezindlu. Sifuna besitshele ukuthi bazoqala nini ukusakhela izindlu,” kusho yena.